> Resource> égwu> Samsung kwuru, sị: Apple Emebi Retrial Kwesịrị kwụsịtụ?
Samsung vs Apple: The Apple patent bụ ghara ịdị irè?
Nke banyere Apple vesos Samsung patent ịda iwu nwere ya ọhụrụ ọganihu. On Nov 20, 2013, Samsung jụrụ a ikpe na Ụlọikpe a kwesịrị kwụsịtụ Apple emebi retrial. Samsung kwuru na US Patent na Trademark Office ajụjụ ndị Apple patent - Ee e 7.844.915, nakwa aha ya bụ tuo ka mbugharị, na chere na nke a Apple patent nwere ike ịbụ ghara ịdị irè. Samsung kwuru na ya ngagharị, ihe e site Patent na Trademark Office-eme ka ọ na-abaghị uru ịnọgide juri ọrụ, nke kpam kpam a n'efu nke oge na akụ. N'ihi ya, na-enwe olileanya Samsung ogige pụrụ ịnụ ya ngagharị ozugbo.
Ọ na-kwuru na Nke 7.884.915-arụ oké ọrụ na patent ịda iwu, n'ihi na ọ bụ isi ihe dị mkpa na Apple ahụhụ nkpoda ọnwụ ruru Samsung patent ịda iwu. Apple zara query. Otú ọ dị, patent Office kwuru na Apple si arụmụka abụghị kwenye ezu. Ọ pụtara na, Apple nwere na-arụ ọrụ siri ike ịchọta ndị ọzọ àmà iji hụ ndaba nke Nke 7, 884.915.
N'oge a, Apple etinyere maka mmezi $ 380 nde maka ọnwụ, ma Samsung chere na ọ dị nnọọ mkpa ka ịkwụ ụgwọ ọzọ $ 52 nde. The nghọtahie e edozi si. N'ikpeazụ, juri si mkpebi bụ na Samsung nwere ịkwụ ụgwọ ọzọ $ 290 nde Apple.
A oké NO on Samsung na Apple ọrụ?
Samsung na Apple dị ukwuu abụọ ama emeputa. Ọtụtụ ọrụ na-riri ahụ na ha onwunwu na egwu Smartphones, dị ka Samsung S4, Samsung Cheta 3, iPhone 5s, iPad Obere 2. Ke obere okwu, na Apple vesos Samsung patent ịda iwu yiri nwere dịghị oké utịp ke Apple na Samsung ọrụ. N'ihi ya, Smartphone ọrụ nwere ike ịzụta na-eji ha Samsung ngwaọrụ, ma ọ bụ onye iPhone, iPad ma ọ bụ iPod, ma ọ bụ ịgbanwee n'etiti Samsung ka Apple, dị ka ha na-amasị.
Gịnị nwere ike Samsung na Apple ọrụ ime?
N'agbanyeghị ihe ikpe Samsung na Apple ọrụ na, ana m arịọ, ihe kacha mkpa ha na-echegbu onwe anyị banyere bụ jikwaa ha Smartphone ọma. Iji mee ka ọ dị mfe ọrụ, m chọrọ ewebata atọ vasatail desktọọpụ software.
1. Software maka Samsung Fans
Dị ka aha ya na-egosi, ndị Wondershare MobileGo for Android na Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) na tumadi mere maka ijikwa na Android ngwaọrụ site na kọmputa. Na ya, Samsung Fans nwere ike mfe na-music, videos, kọntaktị, SMS, ngwa ọdịnala na foto na ha Samsung ntị na mbadamba ọma haziri. Dị nnọọ na otu click, ha nwere ike ndabere ma ọ bụ weghachi Samsung data. N'ihi na ngwa junkies, ha na-ekwe ka ibudata ma wụnye ngwa ọdịnala na Samsung ngwaọrụ ngwa ngwa, na bupu ma ọ bụ òkè ngwa ọdịnala na kọmputa, Facebook na twitter, na-akpali ngwa SD kaadị.
2. Software maka Apple enthusiasts
The Wondershare TunesGo Ochie, n'oge gara aga aha ya bụ na Wondershare MobileGo for iOS na Wondershare TunesGo Ochie (Mac), n'oge gara aga aha ya bụ na Wondershare MobileGo for iOS (Mac) bụ ezigbo onye inyeaka na iPhone, iPad na iPod management. Ọ na-eme ka ọ dị mfe mbupụ music, fim, pọdkastị, audiobooks, iTunes U, music videos, TV egosi na ndị ọzọ na-iTunes ma nyefee ndị ọzọ na-PC na Mac. Ọzọkwa. Ọ na-ahapụ ọrụ tọghata na nyefee music, photos, fim, TV na-egosi na ndị ọzọ site na kọmputa na iPhone, iPod na iPad enweghị ihe ọ bụla hassle.
3. Software n'ihi na ọrụ na-eme ka a ịmafe n'etiti Samsung na Apple
Gịnị ma ọ bụrụ na ọrụ na ha Samsung na Apple ngwaọrụ na-achọ ime ka a mgba ọkụ? Ọ dị mfe. The Wondershare MobileTrans ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac bụ ụzọ. Weere dị ka otu onye-click ekwentị na ekwentị transfer software, na Wondershare MobileTrans-ahapụ ọrụ nyefee kọntaktị, music, videos, ozi ederede na photos n'etiti Samsung ngwaọrụ na Apple ngwaọrụ.
A Complete Okwu Mmalite na 25 8tracks égwu